Socdaalka uu ra'iisul wasaare Khayre ugu ambabaxay Addis Ababa ayaa la ogaadey in uu daaran yahay xiisada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Soomaaliya ayaa caqabad xoogan waxay kasoo wajahdey maareynta xifaalka Itoobiya iyo Masar ee ku saabsan arrimaha webiga Nile.
Xiisadda u dhaxeysa Khaahira iyo Addis Ababa ayaa dhismaha daaran biyo-xireen ay ku baxeyso malaayiin Doolar, balse ay diidey Masar oo sheegtay in uu halis ku yahay.
Muqdisho ayaa dhexda kasoo gashay khilaafka markii ay u coddeysay qaraar lagu taageeray Masar oo dhowaan uu ansixisey Jaamacada Carabta, talaabadaas oo Itoobiya ka careysiisay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir, ayaa aaminsan in madaxda Villa Soomaaliya ay "isku dhax-yaac ku maareeynayaan" xiisadda.
Qoraal uu soo dhigay Facebook ayuu ku sheegay in safarkii uu ra'iisul wasaare Khayre uu maanta ugu ambabaxay Addis Ababa uu la macno yahay "raali-gareynta Itoobiya".
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa shaaciyey in asbuucaan uu Muqdisho yimid Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha Dibadda Masar, Abuubakar Al-xifni, isla markaana uu la kulmay Farmaajo.
Al-xifni ayaa hogaanka dalka ka codsadey in aysan ka noqon mowqifkooda taageerada Masar, sidda uu ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan, oo tibaaxay in socdaalkaas "la qariyey".
Farmaajo ayaa xiriir fiican la leh ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, kaasoo ciidamadda dalkiisa ay qeyb ka yihiin faragelinta ay dowladu ka wado Jubaland si gaar ah gobolka Gedo.
Hoos ka akhriso qoraalka siyaasi Cabdiraxmaan
Dowladda Soomaaliya waxay markii hore la jirsatay dowladda Masar iyadoo kulankii Jaamacadda Carabta codka ku taageertay Dowladda Masar. Itoobiya ayaa ka carootay arrinkaas.
Dowladda Soomaaliya ayaa isku dayday in ay raali gelin afka ah siiso Dowladda Itoobiya oo ay baahi badan u qabto taageeradeeda, gaar ahaan arrimaha haatan ka taagan Gobolka Gedo, laakiin Dowladda Itoobiya kuma qancin raali gelinta, waxay dalbatay in ay Dowladda Soomaaliya qaado talaabooyin muuqda.
Itoobiya sooma aadin Soomaaliya, soomana raadsan taageerada Soomaalida. Balse iyada oo aan weli ku qanacsanayn taloobiyanka ay Soomaaliya qaaday ayaa maanta loo diray Ra'iisul Wasaare Khayre, si uu ugu muujiyo in ay Soomaaliya garab taagan tahay Itoobiya.
Waxaan kaloo kula talinayaa in ay gartaan in sida keli ah ee ku tiirsanaan ajnabi looga maarmi karo ay tahay Soomaalida oo dhexdeeda ka heshiisa.
Waa laga yaabaa in ay idinku adkaato tanaasulka aad walaalihiin Soomaaliyeed u samaysaan, laakiin ogaada mar walba kan aad ajnabiga u samayso ayaa ka sii xanuun badan.
Midowga Afrika oo farageliyey xiisadda Itoobiya iyo Masar ee Nile
Afrika 27.06.2020. 07:30
Itoobiya ayaa u muuqaneysa mid u dhuglaatay cadaadis ay xukuumadda Qaahira saartay.